Iimpawu, ukondla kunye nokunakekelwa kwentlanzi yegolide | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngolunye lweentlobo zoovulindlela kwihlabathi lamatanki eentlanzi. Imalunga nayo intlanzi yegolide. Igama layo lenzululwazi ngu ICarassius auratus Kwaye kwaziwa njengegama eliqhelekileyo legolden carpín. Kwaye le nto yayiyeyokuqala ukuba isetyenziswe njengezilwanyana zasekhaya emva kokubanjwa kwazo. Lunjalo udumo lwabo njengesilwanyana sasekhaya, ukuba namhlanje zezona zininzi kakhulu kwiitanki zentlanzi eziqhelekileyo kuwo onke amakhaya.
Sichaza yonke into malunga nale ntlobo apha. Ukusuka kwezona mpawu zabo ziphambili, koluphi ukhathalelo abaludingayo lokubagcina besempilweni kwi-aquarium yethu. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngefishfish?
2 Indawo yokuhlala yaseGoldfish
3 Ukuziphatha kunye nokondla
Olu hlobo lweentlanzi lunobungakanani obujikeleze i-60 cm ubude. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kukhathalelo kunye nohlobo lwemfuzo onayo, iisampulu ukuya kuthi ga kwi-90 cm ubude zifunyenwe. Ukuba intlanzi ihlala endle inokuba nobunzima obufikelela kwi-30 kilos. Nangona kunjalo, xa ukhathalelwe kwaye ukhuliswa ekuthinjweni, ubunzima besiqingatha.
Banobude obude obuphakamileyo, ngenxa yoko kufanelekile ukuba zizilwanyana kwaye akufuneki ukuba zithathelwe indawo rhoqo. Kuxhomekeke kukhathalelo olunikiweyo nakwindawo yokuhlala apho ikhula khona, iyakwazi ukuhlala ukuya kwiminyaka eli-15. Bafezekile iintlanzi zamachibi ngombala kunye nobukhulu bayo.
Banobubele kwaye abayintlanzi enobundlobongela. Banokuhlala ngokugqibeleleyo kunye nezinye iintlobo zeentlanzi kwi-aquarium efanayo okanye echibini. Umzimba utyheli kwaye awuphelanga. Ngumthunzi otyheli wegolide kunye nokukhanya okuncinci kweorenji kwimisila nakwiimiphetho. Banobuchule ekuqubheni kwaye banobuchule bokukhangela ukutya ngokukhawuleza. Ngokwesiqhelo uyababona behlanganisene ngokwamaqela ukuze bangaziva besoyikiswa kwaye bekhuselana.
Indawo yokuhlala yaseGoldfish
Le ntlanzi inendawo yayo yokuhlala kuzo zonke iindawo ezinamanzi amatsha. Akunakwenzeka ukuyifumana elwandle. Eyona nto icetyiswayo ukulungisa indawo yokuhlala ekufutshane nendalo ekhaya kukusetyenziswa kwamachibi. La machibi aqinisekisa ukuhamba okukhulu kunye nendawo aqhele ukuba kuyo.
Kukho iingcali ezizifundisisile ezi ntlobo kwaye zinokuqinisekisa ukuba zihlala ngcono ekuthinjweni kunakwindawo yazo yokuhlala yendalo. Ingabonakala ingaqhelekanga ngolu hlobo ekuqaleni kokujonga kuba ubude bayo okanye ubunzima bayo abonelanga ekuthinjweni. Nangona kunjalo, ziintlobo esele ziqhele ukuhlala ngale ndlela. Inqaku kuphela eligcina ezi ntlanzi kwindawo yazo yendalo bubushushu bamanzi apho bahlala khona. Ngaphandle koko, azinakuphuhliswa kwaye iintlobo ziya kuphela.
Ekuthinjweni bahlala bhetele ngakumbi nangakumbi kumachibi. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukuba nabo njengezilwanyana zasekhaya okoko nje sinokuqinisekisa ngendawo yokuhlala efanelekileyo kubo.
I-Goldfish inemeko ezolileyo. Ayisoloko inika iingxaki ukuba ihlala nezinye iintlobo. Njengoko zihlala zihlelwe ngokwamaqela xa kukho isampulu engaphezulu kwesinye, kunqabile ukuba kubonakale inye kuphela. Kwindawo yazo yokuhlala yendalo bathambekele ekulweni ezinye iintlobo, kodwa ekuthinjweni bazolile ngokwenene.
Baziintlanzi ezinomdla kakhulu ezithanda ukuphonononga yonke into ejikeleze bona. Baya kuhlala bekhangela izinto ezintsha zokuzonwabisa kunye nokuphononongwa.
Ngokumalunga nokutya kwakho, zijongwa njengeentlanzi ezithanda ukutya okuninzi. Zondla zombini kwizityalo kwindalo yazo nakwezinye iintlobo ezibangqongileyo. Imenyu yabo iqulathe izinambuzane, iintsholongwane, imibungu, izithole kunye namaqanda ezinye iintlobo. Yeyona yokugqibela eyenza ukuba intlanzi yegolide ithathele ingqalelo irhamncwa. Ezinye iintlobo ezininzi kufuneka zibeke esweni amantshontsho azo ukubambisa iintlanzi ezinokubanjwa.
Ukuyondla ukuba siyifuyile, akufuneki ukuba sikhathazeke. Ungamnika ukutya okuthengiswa kwiivenkile zokuloba zombini zihlala kwaye zingaphili. Ukongezwa kokutya kunye nokutya okukhoyo kunokuba yinto efanelekileyo. Eminye imibungu, ulwandle, okanye iintsholongwane lukhetho olufanelekileyo. Kwinxalenye yemifuno, ungamnika iletisi kunye nekholifulawa. Ukuba sifuna ukumphatha ngamanye amaxesha, singamnika i-shrimp. Kuqala, ukuba sikhe sanezi ntlanzi ixeshana elifutshane, baya koyika kwaye boyike ukungcamla ukutya. Nangona kunjalo, njengokuba iintsuku zihamba, ukungathembani kwakhe kuya kudlula kwaye uyakutya yonke into.
Ukubonakala kwayo okuphangiweyo kunokwenza oko ekuthinjweni. Ukuthimba amaqanda ezinye iintlobo kunokwenzeka ngaphakathi kwi-aquarium yakho okanye echibini. Kufuneka ube nolawulo ngakumbi kwezi ntlanzi xa ezinye iintlobo zikwixesha lokuzalisa.
Le ntlanzi intsonkothe ​​ngakumbi xa kuziwa ekuveliseni kwakhona. Imiqathango kufuneka ibe yeyona ifanelekileyo ekuvelisweni kwakhona. Oku kwenzeka kumakhaya endalo kunye nawokuzenzela. Bafikelela ekuvuthweni ngokwesondo xa beneminyaka emibini ubudala. Kuxhomekeke ngokupheleleyo kubude bexesha okwazile ngalo ukuphuhlisa ngelo xesha. Ayisiyomeko yokusingqongileyo kuphela ekufuneka ingqongqo, kodwa nokutya okwaneleyo kokukhula kwayo.
Ukuzala akunzima kakhulu ukuba olona nyango lweentlanzi luthathwe kumzuzu wokuqala. Ukuba zinyanyekelwa emachibini, ukuzala kulula kakhulu. Amaqondo obushushu e-Ambient kunokwenzeka ngakumbi ukuba avelise ukuvelisa xa sele ephezulu. Into efunekayo kukuba ubushushu bamanzi buphezulu ukuze ukuvelisa kwakhona kwenzeke kwiimeko ezingcono. Oku kwenzeka ngexesha lasentwasahlobo.
Ukuthandana ngaphambi komtshato kuyafana nokuba bahlala kwindalo okanye kumachibi. Into eqhelekileyo kukuba kunjalo indoda ezama ukuleqa umntu obhinqileyo ukuze ayifumane. Ukuchumisa kwenzeka xa indoda eyiphumezileyo iphinda ityhalele owasetyhini kwilitye okanye i-algae ejikelezileyo. Le yindlela imazi ewakhupha ngayo amaqanda ayo kwaye eyindoda iyawachumisa.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nentlanzi yegolide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Goldfish
Enkosi kakhulu ngolwazi 🙂
Phendula ku daira